Kuyaziwa ukuthi umuntu engazalwanga, kuba, futhi izisekelo lokhu kubekeka ebuntwaneni. indima ebalulekile ekuthuthukiseni umuntu njengoba ubuntu ezihlakaniphile ukudlala ukuhlakanipha kwakhe namasu, kudingeka ukuthuthukisa isencane.
Lapho ingane isilungele puzzle ekwambulweni
Enye yezindlela eziphumelela kakhulu ukucabanga okunengqondo umuntu, futhi ukuthuthukisa amazinga ayo bokusungula kuyinto puzzle inkomba netiphicaphicwano. Ngaphambi kanjani ukuxazulula puzzle ngamagama kanye netitfombe, futhi inikele ingane nezinye ingqondo imidlalo, kufanele uqiniseke ukuthi ndoda omncane lisuke selikulungele lokhu - wafunda ukukhuluma futhi ukukhomba isithombe. Kufanele kuqale elula puzzle-zithombe. Okwenza ukuba umsebenzi isidingo njengoba zikhula ingane amadala kanye nezinga ukuthuthukiswa ikhono lakhe lengqondo.
Kunezindlela eziningi puzzle ezahlukene. Bonke zingahlukaniswa izigaba:
Puzzle-zithombe. Puzzle kufihlwe izithombe isihloko. Into Igama decrypting kufanele ufunde kuphela uma nominative. Kunezimo lapho into esithombeni, unamagama amaningi noma amanani. Ngokwesibonelo, "ibhasi" futhi "ezokuthutha", "ikati" futhi "isilwane". Kulokhu, udinga ukukhetha igama elifanele, impendulo okuyinto incazelo ezifanelekayo.
Incwadi puzzle sakhiwa zamagama. Bona zingahlelwa ngezindlela eziningi ezahlukene, nokuthi kubalulekile ekulungiseleleni le puzzle.
Isithombe + incwadi. Indlela ukuxazulula emaphazili lanetincetu izinhlamvu nezithombe? Umkhondo esemqoka ye rebus isithombe kanye izinhlamvu zibonisa ukuthi impendulo kuphela yeqiniso kubalulekile ukuze ulungise kancane igama nesithombe tesifundvo.
Rebus "isithombe + inombolo" kuyinto Analogue of rebus "isithombe + incwadi", kodwa lapha aphelele izinombolo ukucinga indikimba yendaba, futhi leyo mali zingahluka.
Puzzle ngamakhoma. Kaningi, e izimfihlakalo isithombe ukhefana, evamile noma nabokhulumile. ukuxazulula kanjani emaphazili lanetincetu okhefana? Lolu phawu lubonisa ukuthi impendulo kuyadingeka ukuze unciphise igama into idwetshwa isithombe, ukulahla incwadi nesibongo.
Indlela ukufundisa ingane yakho ukuxazulula puzzle: izeluleko namathiphu
I kubazali yokukhulisa izingane ngubani indlela efanele kusukela zisencane ukubandakanya izingane zabo ekuxazululeni puzzle. Isixazululo lezi puzzle ikhuthaza ukuthuthukiswa yikuphi ukuhlakanipha ukucabanga kohlaziyo, nobuciko kanye eyinqaba, nokucija, ukugxilisa ingqondo, ukunakwa.
Kodwa indlela yokwenza onjalo 'Ukushaja ukuze ingqondo "Kwakufana ingane? Nanka amanye amathiphu ezilula kodwa eziphumelelayo:
Isineke, isineke futhi ukubekezela! Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba izingane libhekene i ukungahlaliseki angunaphakade washesha.
Uma ubona ukuthi ingane ayikwazi ukuxazulula puzzle - akabahluphi ngokwami noma kuye! Linda isikhashana, kungenzeka ukuthi ingane maduze ukuzibonakalisa kuleli isithakazelo umsebenzi.
Puzzle Kufanele kukhethwe ikhumbula sigaba sobudala uhlala. Ngakho, uma ingane ikwazi ukufunda kuphela, kufanele ukhethe puzzle Isithombe noma nezimfumbe izinhlamvu; uma ingane kungaba kakade kubhekwe - akusiyo engadingekile ukuchaza indlela yokuxazulula emaphazili lanetincetu izinombolo, njll
Ngesikhathi sigaba ezihilela ingane "ingqondo imidlalo" kutuswa makudle kakhulu elula puzzle-zithombe. Kubalulekile kakhulu ukuthi zingabantu ezimibalabala.
Khuthaza ingane yakho ukuba ukuxazulula puzzle amandla akuvunyelwe nhlobo, ngoba kungenzeka anqande ngokuphelele isifiso sengane izifundo yalolu hlobo. Indlela ephumelela kangcono ubhekwa umdlalo amaphazili ekwambulweni.
Ngaso sonke isikhathi hlola nezimfumbe ngezimpendulo. puzzle okunjalo izinyane ongaxazulula bebodwa ngaphandle kosizo kwabazali. Indlela Solutions imvuthuluka ichaze ngokwayo, kusukela impendulo.
Kufanele uholwe imithetho ezokwenza ukuba uqonde indlela yokuxazulula emaphazili lanetincetu izinhlamvu izithombe, kanye amadijithi noma amakhoma.
Funda ukuxazulula puzzle
Funda indlela yokuxazulula puzzle, ukusiza iqoqo imithetho ekhethekile:
Izimpawu zokubhala kanye indents e rebus azisho lutho.
Jigsaw is funda kusuka kwesokunxele kuya kwesokudla, phezulu kuya phansi.
Into Igama, zaveza isithombe, ukufunda esimweni nominative.
Uma isithombe sikhombisa izinto eziningana ezifanayo, igama esithombeni kufanele ufunde isebuningini.
Isithombe-puzzle zingase zibe namagama amaningana (inani ethize).
Isithombe nabokhulumile yesithombe sibonisa ukuthi isihloko kufanele ufunde oda reverse - kusukela kwesokudla kuya kwesokunxele.
Indlela ukuxazulula puzzle ngamakhoma? Uma kwesokunxele isithombe kukhona eyodwa noma ngaphezulu okhefana ke iqedwe izinhlamvu zokuqala izwi. Bangaki amakhoma njengoba izincwadi kumelwe zilahlwe. Uma ilungelo isithombe kuwufanele ukhefana noma ngaphezulu, kufanele ususe incwadi yokugcina esihlokweni isihloko.
Ukuba khona izinhlamvu sawela ukuphuma uthi kufanele zisuswe kusuka izwi.
Ukuba khona eduze-rebus izithombe ewela aphume izinombolo ebonisa ukuthi incwadi, elingelakwaJuda inombolo ye-serial esuswa isithombe isihloko.
Ukuba khona incwadi uphawu "+" libonisa ukuthi lokhu kumele kulekelelwa igama incwadi isihloko ukuqagela puzzle.
Ukuba khona eduze izinombolo isithombe bese izincwadi, phakathi lapho kukhona uphawu "=" ebonisa ukuthi incwadi inani elithile serial kumelwe ithathelwe isikhundla ecacisiwe.
Uma kukhona rebus sawela ngokuphambeneyo incwadi kufanele sibeka izaba "cha".
Puzzle-hlobo "incwadi" funda ngokusebenzisa phakathi izinhlamvu (noma amagama) isabizwana "e".
Rebus njengoba ingxenyenamba ezivamile okumelwe ifundwe, unezela isabizwana "ku", "ngaphansi" noma "phezu".
Uma uhlamvu olulodwa (sibalo isithombe) kuboniswa ngemuva ngezinye izincwadi, kuyafaneleka ukuze ungeze isabizwana "phambi" noma "i-".
Uma rebus bofeleba imele eceleni amancane, ukuba igama ofuna ukwengeza isabizwana "ngaso" noma "u" (kungaba ekuqaleni, maphakathi noma ekupheleni).
incwadi elikhulu, yakhiwe ngezinhlamvu eziningi ezincane, uqokomisa isidingo ukusetshenziswa isabizwana "ka".
Uma umusho, bofeleba okubonisa eziningi izinhlamvu ezincane, e emagama, zisebenzisa isabizwana "ngoba."
Movement umcibisholo kuboniswe esithombeni ibonisa ukuthi kubalulekile ukusebenzisa isabizwana "ngoba" noma "ngokumelene."
Ukuba khona izincwadi ezimbili ezifanayo elandelanayo kubonisa ukuthi ukufunda udinga ukusebenzisa igama elithi "umusi".
Ukuze ngemfihlo amazwi angasetshenziswa amanothi, izimpawu izakhi zamakhemikhali, izinhlamvu, izinombolo, njll
Izibalo, okuyizinto eduze sibalo abonisa kulokho oda kumele kufundvwe rebus.
Uma kukhona izincwadi ezimbili eduze isithombe, phakathi lapho uphawu "=", bese uhlamvu olulodwa ukuze uthole omunye umkhondo yenkinga kufanele kuphenduke ngenye.
Rebus - ukukwenza wena ngokwakho!
Omunye akumelwe nje bagcine ngokufuna ukwazi ukuthi ukuxazulula emaphazili lanetincetu izinhlamvu izithombe, kodwa futhi zifunde ukwenza ngokwakho noma nengane yakho. Lokhu kuyoba omunye umsebenzi okuthakazelisayo lapho ingane yakho bazokwazi ukuba baveze imizwa yabo.
Ukwakha siqu logic emaphazili yakho, sebenzisa iziqondiso ezilandelayo:
Bukani zonke imithetho ukuxazulula puzzle.
Uqala nabanye puzzle elula. Kulesi sigaba, imvuthuluka kungaba ngokucacile uchaze ukuthi ubethele iphazili igama elithile. Ngokwesibonelo, bhala inombolo "7" kanye nencwadi "Mina" - ". Umndeni" umkhondo iyizwi
Chazela ingane yakho ukuthi igama lesiHeberu elifanayo kungaba impendulo eziningi puzzle ezahlukene. Ngokwesibonelo, ukuthatha zonke ngezwi elifanayo "umndeni", kungaba ibethelwe e rebus "7Ya" futhi "yayayayayayaya".
Ukuze inqubo inkumbulo ukuqeqeshwa ukucabanga okunengqondo njengengane, wayefuna ukuhamba emuva ezilandelwayo kanye nokuxazulula puzzle ngokuphindaphindiwe, amnike amateur igalofu.
Thatha ishidi engenalutho iphepha, izimpawu egqamile futhi emapeniseli emibala, omagazini (okuyinto ungakwazi ukuphuma izingxenye iphazili esizayo), ne-glue. Ngokwesibonelo, atholakala isithombe umagazini wendebe - sinqume, kunanyathelwe albhamu ishidi, nangaphansi isithombe wazizwa-tip ipeni bhala "W = J". Rebus wadala! Impendulo - seagull.
izifundo Fun futhi ewusizo kuwe!
"Blue Umcibisholo" - ujantshi (umklami yezingane): imishini, amanani, ukubuyekezwa
Indlela ukwandisa amasosha omzimba wengane: ezinye izincomo
Izinkulisa (Ekaterinburg): kanjani ukukhetha
Kudepsta. Rest ngo Sochi.
Manje Izinzuzo Ezilula Ezikhaleni Ze-Inthanethi Vula Kuyo Wonke umuntu!
Izimo Asthenic: akubulali, kodwa namanje ...
Aspen amagxolo: ekwelapheni prostatitis. Zokupheka of imithi yendabuko
Ikhekhe Soft nge Ukhastadi: isinyathelo ngesinyathelo iresiphi
Olinganise Umdwebo womuntu. Wacondza kobuso nokuma komzimba womuntu